Clickfor.net | Iblogi yeeNdwendwe | Ngenisa ibhlog yeeNdwendwe - Bhalela US | Iindaba kunye neNqaku lokuBloga | Indawo yokuBloga yeeNdwendwe
15 49.0138 8.38624 Utolo 0 Utolo 0 4000 1 oxwesileyo https://www.clickfor.net 300 0 1
Agasti 31, 2019
Imithetho ye-5 ye-Acing yoNxibelelwano lwefowuni yeMisebenzi yezoMthetho
Inqanaba ngalinye lenkqubo yodliwano-ndlebe liyinxalenye ebalulekileyo yento ekwenza ube nesiphumo sokugqibela. Oko kuthetha ukuba kufuneka ulungele ukwenza konke okusemandleni akho kwinqanaba ngalinye lomdlalo. Ukuba ufuna ukuqinisekisa ukuba ujongeka unomtsalane ngefowuni, kuya kufuneka uphonononge ezi zintlanu...
5 Iingenelo Zokuba Ngumthambo wakusasa
Nangona kungekho xesha linokuthiwa lelona lihle kakhulu ekusebenzeni wonke umntu, ukuqeqeshwa kwasekuseni yindlela efanelekileyo yokuqala usuku lwakho. Emva kwemizuzu engama-30 ecetyiswayo yokuzivocavoca ngaphambi kokuba uqalise imisebenzi yosuku, uqinisekile ukuba akukho nto iya kuphazamisa ...
Septemba 23, 2018
Top 5 Luxury Amava in India
Amava ama-5 aphezulu aseIndiya: I-Indiya yenye yezona ndawo zimangalisayo emhlabeni, kunye nobuninzi bayo bendalo kunye nokubaluleka kwembali. Kodwa kuthekani ngokufumana olu lonwabo lwendalo phakathi kwasebukhosini baseIndiya? Oku kwenzeke kwezi ndawo zilandelayo zokhenketho ezitofotofo kweli lizwe. kwakhona usindwendwele kwi The Thus 1. I...
I-Vrindavan: Usuku kwi-ISKCON
Iindlela ezi-3 ezilula zokubonisa uMphathi wakho wombulelo
Kutheni le nto kufuneka unikezele ngeNkqubo yakho yeVisa kwiiNkampani zobuGcisa?
Jonga iKolkata ngeyona nkonzo ikhuselekileyo yeteksi yase-Savaari ngexesha lokutshixa
Izizathu zokuBhukisha iCruise yezothando kumntu oKhethekileyo
Aprili 4, 2022
Iingcebiso ezi-4 zokuHlela iividiyo zePro oFumana Uzazi
Iindlela ezizezinye zeChromecast onokuthi uzithathele ingqalelo kwiTV yakho
Khusela izinto zakho zedijithali kunye nezisombululo zokhuseleko zeKaspersky kwi-Airtel Enkosi app
Iindlela ezi-5 ezilula kodwa ezisebenzayo zokugcina amandla
Ngamana 3, 2022
Yeyiphi i-6bt Cummins Eyeyona ilungileyo kuTshintsho lwakho?
I-injini ye-Diesel eyi-6-cylinder iye yanda kakhulu kwishishini lelori kuba inika uqoqosho olungcono lwamafutha kunye nokukhwela okungcono. Phantse bonke abenzi belori banikezela ngeenjini zeDizili eziyi-6-cylinder njengesiqhelo. Namhlanje, unokukhetha kumakhulu eemodeli ezahlukeneyo zelori kwihlabathi liphela. Ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho, ungafuna ukutshintsha i-6-cylinder yakho... Funda Okuninzi
Indlela yokuthenga i-Crypto eUkraine?
Ishishini le-crypto libonise ukukhula okubonakalayo kule minyaka imbalwa idlulileyo. Iiplatifti ezininzi zokujongana ne-asethi yedijithali zivela kwimarike, kwaye iiprojekthi ze-crypto zikhula ngokukhawuleza. Ngenxa yoko, abantu abaninzi abangazange babenomdla ngaphambili kwi-crypto sphere baqala ukuzibuza ukuba bathenge phi i-cryptocurrency ... Funda Okuninzi
Ungazikhetha njani iiNkonzo zoLondolozo lweNgcali yobuGcisa
Ubusazi ukuba umndilili waseMelika uchitha ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-70 ngonyaka esebenza eyadini okanye egadini yakhe? Utyalo-mali kukhathalelo lwengca inokuba yindlela ekhawulezayo yokongeza iiyure ezixabisekileyo kwimpelaveki yakho. Nokuba ufuna ukulungiswa kweyadi rhoqo okanye iingcali zokusombulula iingxaki ezinzima, ukuqesha iinkonzo zokhathalelo lwengca kuno... Funda Okuninzi
Aprili 21, 2022
Izibambo zeTephu yebhiya eyohlukileyo kwi-Kegerator yakho
Ubuhle bokusela ibhiya bubaluleke kakhulu. Thenga izibambo zempompo yebhiya ezizodwa ukwenza ixesha lakho lokuzonwabisa libe nesitayile ngakumbi. Fumana eyona mibambo yetephu yebhiya enomtsalane kwivenkile ye-intanethi yeSiselo soBugcisa. Ezona ziPhathi zeTephu yeBeer Ezenza iSigcini sakho sibe Sodwa kwaye sibeSitayile Ngokungaqhelekanga nezimangalisayo izibambo zempompo yebhiya ziyafuneka zombini ukusela... Funda Okuninzi
Ukuhlela yenye yezona zinto zingahoywanga kwimveliso yevidiyo. Kwaye kunjalo, yenye yezona zibalulekileyo. Yinto ejika uthotho lweekliphu ezingaqhelekanga zibe libali! Nantsi into nangona kunjalo, ngokuhlelwa kwevidiyo. Ukuba wenza umsebenzi wakho ngokufanelekileyo, akukho mntu uya kuqaphela ukuba ulunge kangakanani. Kunoko, baya kuba... Funda Okuninzi
Matshi 29, 2022
Ukukhetha isatifikethi phakathi kwe-CCSP (i-Certified Cloud Security Professional) kunye ne-CISSP (iiNgcweti zoKhuseleko lweeNkcukacha eziQinisekisiweyo) yinto ekhohlisayo. Ekubeni zombini ii-cert zifana kwaye ziphuhliswa ngumbutho ofanayo ogama lingu (ISC)2 (i-International Information System Security Certification Consortium). Unokukhetha isiqinisekiso onqwenela ukusenza ngokuxhomekeke kwinto oyifunayo... Funda Okuninzi
IiNzuzo ezi-5 eziKholelekayo zeNtengiso yeDijithali kuShishino
Uya kubona ipateni engaqhelekanga ukuba ukhe wakhangela kwizibalo zentengiso yedijithali. Phonononga idatha yayo nayiphi na inkalo yokuthengisa idijithali - imidiya yoluntu, i-SEO, i-imeyile - kwaye uya kuqaphela ukuba idatha ihlala ibonisa indlela ephezulu. Mhlawumbi kungenxa yokuba i-intanethi isencinci xa ithelekiswa nezinto ezininzi zale mihla. Ukuba kunjalo,... Funda Okuninzi
Matshi 28, 2022
Ezona zinto zi-5 ziPhakamileyo zoKhuseleko kwiMoto yakho ngo-2022
Unokuba ngoyena mqhubi ubalaseleyo emhlabeni, kodwa awukwazi ukuhlala uqikelela ukuba abanye abantu endleleni baya kuziphatha njani. Omnye umntu unokukukhawulezisa kwindawo yakho eyimfama okanye aqhawuke ngokukhawuleza xa uzamla. Xa oko kusenzeka, iimpawu zokhuseleko lwesithuthi sakho zinokubusindisa ubomi bakho. Uninzi lweemoto zangoku zineemoto ezininzi ... Funda Okuninzi
Matshi 25, 2022
IChromecast yenye yezona teknoloji zibalaseleyo zokuguqula umxholo wefowuni okanye ithebhulethi kwiscreen esikhulu. Kulula kakhulu ukunxibelelana nomabonwakude kwaye kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Kodwa njengomsebenzisi, kufuneka wenze izigqibo ezifanelekileyo xa kuziwa kutyalo-mali kuyo nayiphi na itekhnoloji. Yiba... Funda Okuninzi
Matshi 23, 2022
Njengoko ilizwe lethu lisiya lidityaniswa nehlabathi le-intanethi okanye ledijithali, umngcipheko wohlaselo lwe-cyber ubonakala ngakumbi. Rhoqo kwimizuzwana engama-39, kukho uhlaselo lwe-cyber lwenzeka kwindawo ethile emhlabeni. Oko kubalela ngaphezu kwama-2,200 ohlaselo lwe-cyber ngosuku. Linani elothusayo lehlabathi elitshintshayo kwi-intanethi... Funda Okuninzi
1 2 ... 56 IZITHUBA EZINDALA
Disemba 11, 2019
Uyikhetha njani iSeer yoLondolozo lweNgcali yobuNgcali...
Izibambo zeTephu yebhiya eyohlukileyo yeKegerat yakho...
2020 Clickfor.net . ONKE AMALUNGELO AGCINIWE.